maa ụlọikwuu na-ehi ụra
Mgbe ị na-ama ụlọikwuu n'ime ohia, otu akpa ụra nwere ike bụrụ ụlọ ọrụ nchekwa okpomọkụ gị kachasị mkpa. Ngwongwo ya enweghịkwa ihe ọ bụla ọzọ. Itinye ego na ezigbo ụra ihi ụra agaghị eme ka ị nwee ụra abalị na-enye obi ụtọ ma sie ike, mana ọ ga-ebelata ibu ibu na ohere nchekwa nke akpa gị. Akpa ụra na-aba uru iji soro gị ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịrahụ n'ime ọhịa. Ihe mkpuchi akpa ụra a bụ owu ...
Mgbe ị na-ama ụlọikwuu n'ime ohia, otu akpa ụra nwere ike bụrụ ụlọ ọrụ nchekwa okpomọkụ gị kachasị mkpa. Ngwongwo ya enweghịkwa ihe ọ bụla ọzọ. Itinye ego na ezigbo ụra ihi ụra agaghị eme ka ị nwee ụra abalị na-enye obi ụtọ ma sie ike, mana ọ ga-ebelata ibu ibu na ohere nchekwa nke akpa gị. Akpa ụra na-aba uru iji soro gị ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịrahụ n'ime ọhịa.
Ihe mkpuchi nke akpa ụra a bụ akwa owu ma kpuchie ya na akwa nylon na-enweghị mmiri maka okpomọkụ na nkasi obi. E nwere ihe abụọ dị iche iche nke na-ejuputa ihe ị ga-ahọrọ: otu dị ala, nke a na-eji ezi ịhụnanya na compressibility mara. Nke ọzọ bụ naịlọn na polyester ndochi, nke na-adịchaghị ọkụ na compressible karịa eiderdown. Enwere ike imeghe akụkụ atọ nke akpa ụra. Y’oburu n’ọkụ n’uche, a ga-emepe akpa ura ya nke ọma maka ụra abalị.
Njirimara dị iche iche nke ngwaahịa:
Dabere na okpomọkụ dị n'èzí, ọ nwere ike jupụta n'ụdị dị iche iche nke ala ma ọ bụ ndochi polyester.
2100g dabara maka -15 ℃
1800g adabara -10 ℃
1000g dabara maka 0 ℃
Rịba ama: n'elu ibu bụ naanị ibu arọ.
2.3kg kwesịrị ekwesị maka okpomọkụ dị n'èzí -5-0 ℃
2.0kg adabara 0-5 ℃
1.6kg kwesịrị ekwesị maka 5-10 ℃
Mara: arọ nke polyester nwere ike ịsacha bụ 400g / m. Na ịdị arọ dị ngụkọta akpa ihi ụra.
Nke gara aga: Multifunctional wristband na ikiaka band
Osote: Akpa ekwentị mkpanaka aka maka egwuregwu